Ngaba kunokwenzeka ukudala i-backlink esemgangathweni yewebhu?
Kungaba nzima ukufumana i-backlink kwiwebhusayithi ye-e-commerce. Nangona kunjalo, unokuphephelela le nkqubo yokuphucula injini yerhwebo njengoko kuFANELELE ngempumelelo yakho yezoshishino. Yiyo imeko kwininzi lwamashishini ase-intanethi. Ingaba inqabileyo kwimithombo yewebhu engenayo iblogi.
Kufuneka ulungele ukuba ukudibanisa inkqubo yokwakha kuya kuthatha ixesha elininzi kunye nemigudu nangona ungayiva ngale nkqubo evela kwii-arhente ezahlukeneyo zokulungisa iinjineli. Bathembisa ukudala iphrofayili yekhonkco ephakamileyo phakathi kwenyanga ngenani elifanelekileyo. Nangona kunjalo, kufuneka uqonde ukuba yonke into iyandila kakhulu ukuba inyaniseke. Enyanisweni, kuthatha ubuncinane inyanga ezintandathu okanye ngakumbi ngokuxhomekeke kwishishini lakho nakwi-market niche.
Ekukhanyeni kokuhlaziywa kweGoogle kokugqibela, kufuneka uqaphele kakhulu kumgangatho we-backlinks oyidala. Kufuneka zakhiwe ngokufanelekileyo kumashishini akho, imithombo yolwazi yewebhu. Ngaphezu koko, kufuneka uhlolisise ukuba i-website ihlawulwe ngaphambili okanye ayikho. Ukudala i-backlinks, unokomeleza zakho izikhundla kwiphepha lokukhawulela okanye ubenciphise ukuba ibonise iGoogle ukuba awuyiyo imvelaphi ye-intanethi ethembekileyo.
Esi sikhokelo senzelwe ukwabelana nawe ezinye zezicwangciso zokuqhagamshelana ezinxibelelwano ezingcono kakhulu ezisebenza ngokufanelekileyo kwimithombo ye-intanethi ye-e-commerce.
Iindlela zokudala i-backlinks esemgangathweni
Ipesenti ephezulu ezininzi iindlela ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, emva kokungaphumeleli kwabo, iikhonkco zabo zihlala zikhona. Amaqabane abo asekuqaleni adibanisa nabo kuba abanalo indlela yokukwazi ukuba aba bhishino abakhoyo kwaye bayabamba isikhundla. Amaphepha abo ewebhu asebenzayo, kodwa ayenayo nayiphi na ixabiso okanye isithuthi. Kwiimeko ezininzi, abahloli bekhonkco eziphukileyo abanakuzifumana.
Ukusebenzisa "indlela yokuhamba yabantu," ungasebenzisa amaphepha afumanekayo ngenzuzo yakho. Unokwakhokelela kwimithombo yewebhu njengeyakho, ukufumana iiwebhusayithi ezifile ezidibanisa nabo. Unokucela ukuba aba bantu badibanise kwiwebhusayithi yakho endaweni yoko. Ngokufeza le ndlela yokwakha yokunxibelelana elula eyenziwe nguBrian Dean (umdali we-blog yase-Backlinko SEO), unokwakha i-backlinks esemgangathweni kwiziko lakho ngendlela ekhululekileyo kunye neyendalo.
Ibhendi ekhankanya isakhiwo sekhonkco
Le ndlela yokwakha ikhonkco isebenza lula kwaye ingasetyenziswa ngamashishini athile angathanda ukudala i-backlinks esemgangathweni. Yonke into oyifunayo kukufumanisa ukuba imithombo yewebhu sele isethetha ntoni nge-brand yakho kunye nemveliso oyithengisayo, kwaye ubacele ngobubele ukuba bangeze isiqhagamshelo sakho somthombo kwizibuyekezo zabo. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba ubuze i-backlinks, kufuneka ukhangele ukuba umthombo wewebhu ungaba nethuba elikhulu lokwakha unxibelelwano okanye awufanelekanga ingqalelo yakho. Enye into oyifunayo ukuyiqwalasela kukuba oku kukhankanywa akukhenxwanga Source .